Shina China Telescopic Hydraulic Cylinder orinasa sy mpanamboatra | Xinrun
1.Varingarina hydraulic teleskopika dia antsoina koa hoe varingarina hydraulic multi-sehatra. Izy io dia misy varingarina piston roa na marobe, izay misy lohan-varingarina, barika varingarina, tanany, piston ary faritra hafa. Misy seranan-tsambo fidirana sy fivoahana a sy B amin'ny lafiny roa amin'ny barika varingarina. Rehefa miditra ao amin'ny port a ny menaka ary miverina avy amin'ny port B ny solika, ny piston dingana voalohany misy faritra mahomby lehibe kokoa no atosika, ary avy eo mihetsika ilay piston dingana faharoa kely kokoa. Satria tsy miova ny tahan'ny mikoriana ao amin'ny port a, ny piston misy faritra mahomby lehibe dia manana hafainganam-pandeha ambany sy avo, raha tsy izany, hafainganam-pandeha avo sy ambany atosika. Raha misy solika ao amin'ny seranana B ary miverina ny solika ao amin'ny port a, ny piston faharoa dia hiverina amin'ny teboka farany aloha, ary avy eo hiverina ny piston voalohany
2.Ny toetran'ny varingarina hydraulic teleskopika dia: ny lalan-drà miasa mety ho lava be, ary azo hafoina rehefa tsy mandeha. Izy io dia mety amin'ny fotoana izay voafetra ny toerana fametrahana ary ny halaviran'ny fivezivezena dia lava be, toy ny fisondrotan'ny teleskaopy ny kamio sy ny crane. Rehefa mivelatra tsikelikely ny varingarina hydraulic teleskopika dia mihena tsikelikely ny faritra miasa mahomby. Rehefa maharitra ny tahan'ny fidiran'ny fidirana dia mihombo tsikelikely ny hafainganam-pandeha; rehefa tsy miova ny enta-mavesatra ivelany, dia mihamitombo tsikelikely ny tsindry miasa amin'ny varingarina hydraulic. Miankina amin'ny tsindry menaka ny fanitarana ny varingarina hydraulic teleskopika tokana, ary miankina amin'ny lanjan'ny tena na enta-mavesatra ny fihenan-tsasatra. Noho izany dia ampiasaina amin'ny trondro fampisongadinana na fihodinan'ny varingarina misy varingarina ..
3.a. Fifandraisana eo amin'ny varingarina sy varingarina
Misy karazany maro ny fifandraisana misy eo amin'ny varingarina sy ny varingarina, toy ny fifandraisana amin'ny tsorakazo, ny fifandraisana amin'ny flange, ny antsasaky ny peratra anatiny, ny fantsom-pifandraisana. Voafantina eto ny fifandraisana misy. Karazana
b. Fifandraisana eo amin'ny tehina piston sy piston
Ny fifandraisana eo anelanelan'ny piston sy ny piston dia manangana ny rafitry ny kofehy sy ny firafitry ny fifandraisana lehibe. Ny firafitry ny fifandraisana kofehy dia tsotra sy azo ampiharina, ary be mpampiasa izy io; ny mekanisma fampifandraisana manan-danja dia mety amin'ny varingarina miaraka amina tsindry miasa lehibe sy hovitrovitra mafy amin'ny milina miasa. Noho izany, ny firafitry ny fifandraisana misy kofehy dia voafantina amin'ny anton-javatra maro samihafa.
d. Antoka azo antoka amin'ny sakana varingarina hydraulic
Ho an'ny varingarina, ny tsindry hydraulic, ny hery mekanika ary ny fiarovana dia misy fiantraikany amin'ny sakana varingarina. Ny tsy fahombiazan'ny varingarina hydraulic noho ny tsindry mafy sy ny fahaverezan'ny fahaiza-miasa mahazatra dia matetika miseho amin'ny endrika telo: olan'ny tanjaka, olana henjana ary olana miavaka, ary ny tena zava-dehibe dia ny olan'ny tanjaka. Mba hiantohana ny tanjaky ny varingarina dia tsy maintsy dinihintsika ny anton'izany fiarovana izany
Teo aloha: Loader Hydraul Cylinder
Manaraka: Jack Jack
Silinder fanodinana hydraulic Machines
Vovon-tsolika Hydraulika fanariam-pako
Cylinder Hydraulika fitaovana fanadiovana tontolo iainana